Iimaski ezithambisa isikhumba ebusika
Ebusika, kunanini ngaphambili, ulusu lobuso lubonakaliswe kwimiphumo emibi yemozulu ebanda, yomoya neqabileyo. Kule ngongoma ekufuneka ibuyiselwe kwakhona kwaye yondliwe. Ngenxa yeso sizathu, emva kokuxubusha, abacebisi bacebisa ngamandla unyango lobuso busika obukhethekileyo, kuquka nokusetyenziswa kweempawu ezihlukahlukeneyo ezithintela ulusu ebusika. Ingakumbi ixhatshazelisa ulusu olumele lube lumile kunye nolaka. Zonke iimaski zokucokisa isikhumba ezicetyiswa kuthi ngokuqinisekileyo ziya kunika i-recharge ngempumelelo kwesikhumba ebandayo kwaye ziyibuyisele ngokupheleleyo.
Ukunyamekelwa kwamanzi kunye nolusu ebusika
Ebusika, isikhumba sombuso, ngokuqhelekileyo, sibonakaliswa yimiphumo efana nokuvakalelwa, ukuqina, ukubonakala kwesikhumba kwiindawo ezithile zobuso, kunye nokuvuvukala rhoqo kunye nokuvutha komsindo. Iimpawu ezimbini zokugqibela zizinto eziphezulu kakhulu ebusika kumhlobo wesikhumba owomileyo. Ukongezelela, ebusika, ukusetyenziswa kwezimonyo kunye neemveliso, ezinemveliso yokumisa, inefuthe elibi kakhulu. Ingakumbi ixhala insipho, esiyijwayele ukuhlamba ubuso bethu imihla ngemihla. Ngoko ke, ukuba neengxaki ezinxulumene nobume obubalulekileyo besikhumba, kubalulekile ukuthetha ngokucokisekileyo ukhetho lwezonyamelo kunye nezinye iindlela zokunyamekela ubuso. Kwakhona kufuneka kukhunjulwe ukuba ebusika kunqatshelwe ukuba usebenzise iintlobo ezahlukeneyo zokuhlambela. Ukuhlamba ubuso bakho ngokucokisekileyo, kucetyiswa kuphela kusihlwa ngaphambi kokulala, kodwa kungekuso ekuseni, ngaphambi kokuphuma kwiqhwa. Akunangqiqweni ukuba uqaphele ukuba nje ngexesha lokulala isikhumba sethu siphume, ngokuninzi kangangoko kunokwenzeka ukuba i-skinworm eqokelela ebusweni. Ngentsasa kucetyiswa ukuba uhlambe ubuso ngokulula ngamanzi apholileyo. Kuyimpumelelo kakhulu ukugcina umswakama ebusweni bakho lonke usuku olutsha, oluya kufakwa ukuhlamba emanzini. Ungalibali ukusebenzisa ukhilimu obusika obusika ebusweni. Kuya kuba kufanelekile ukuba uqaphele ukuba emva kokusebenzisa imfeneko ebusweni ebusweni, kuyacetyiswa ukuba usebenzise eso sikhilimu. Kwaye ukugqoka loo maski, kuyacetyiswa ukuba uhlambulule ubuso obusweni ngaphambili. Yenza i-masazimoy, icetyiswa amaxesha ama-2-3 ngeveki, kwaye ixhomekeke kwimeko yesikhumba, eguquka kwisiseko semozulu okanye ukuhamba kwexesha lokuhlala kwakho kubanda.
Kwaye okokugqibela, umphumo omkhulu wokunciphisiswa unikezwa kuphela ngalawo maski ebusweni ehambelana ngokupheleleyo nokunyamekelwa kwasebusika. Zizo, njengomgaqo, iimaski ezinamanci ezinomxholo ophezulu wokunciphisa kunye nezondlo.
Ubusika busika ebusweni, ngokusekelwe kwiingxaki zobuso obubi kunye neentlobo zawo
Umrhumo wayo ngamnye wemaski, njengommiselo, kufuneka ukhethwe ngokusekelwe kwiimpawu zesikhumba ngasinye (uhlobo lwawo kunye nelizwe). Ngokomzekelo, ukuba unesikhumba esinamafutha, uya kulungelelaniswa ngokugqithisileyo ngejisi yamagilebhisi kunye neenkukhu zenkukhu. Yilungiselele lula kakhulu: thabatha i-yolk, uyihlule kwiprotheni uze uyidibanise nesiqingatha sepuniji yejusi yamagilebhisi (ekhutshwe, kodwa ngaphandle kweshukela). Ukwenza imaski ihambelane ngokulinganayo, yongeza umgubo oqhelekileyo kuwo kwaye udibanise ngokuzeleyo size sithole ubunzima obufanayo. Sibeka imaski ebusweni, emva kwemizuzu engama-20 sihlamba, sitshintsha amanzi atshisayo kunye ashushu.
Abanikazi benkxalabo enzima kakhulu yesikhumba ebusika, ogama lakhe "lime" Ukulungiselela kwayo, sithatha ibhanana kwaye sixoke ngokucophelela isigxina se-pulp yayo. Emva koko gubungela isipuni sesamba sebhanana yethu kunye nomlinganiselo ofanayo we-cottage shizi kunye neenqwanqwana ezi-2 zamanzi zobisi olufudumeleyo. Ukuba akukho ubisi osesandleni, kunokukhangela ngokulula ukhilimu omuncu okanye ukhilimu ngomlinganiselo ofanayo. Emva koko sifaka ii-2 ezincinci zeengxowa zobusi kwi-mix. Sigcina imaski imizuzu engama-20, kwaye siyisuse ebusweni ngoncedo lwamanzi afudumeleyo.
Kwakhona kwesikhumba esomileyo ngexesha lokubusika, i-mask yeoli yeoli yomnqumo iyakwenza kakuhle. Sithatha intwana encinane ye-macaroni kwaye siyifake kwioli yeoli, size sibeke le greyiti ebusweni imizuzu engama-20 ngaphambi kokulala. Emva kokuphela kwexesha, hlamba kwaye usebenzise ukhilimu wasebusika obondla.
Ukuba unomnxeba odibeneyo, unciphisa ulusu kwindawo yokubanda kukuncedisa ukuba udibanise nobusi kunye nesonka somnyama. Emva koko, wongeza ubusi ngobuninzi bepunipoon yemali efanayo yeoli yeoli. Ngaphambi kokuba usebenzise umaski ogqityiweyo, hlambulule isikhumba uze usebenzise ukhilimu onondla kuwo, kwaye ke imaski, ekhuthazwa ukuba isuswe emva kwemizuzu engama-20.
Kwaye akukho apha kuphela ukunciphisa, kodwa nokukhupha ukucaphukisa, kunye nokunciphisa isikhumba esichukumisayo sepomozhetotvarnoy. Sithatha amazambane amancinci kwaye sibilise "kwi-vmundir", ke masiyipholise, emva koko siyihlambulule kwi-peel kunye ne-mime size sifumane amazambane ahlambulukileyo. Thatha isipuni se-1 se-potato efudumele i-purette uze uthele kuso isipuni se-1 sobisi, ungeze i-teaspoon yeoli yeoli. Sifaka imaski ebusweni malunga nemizuzu engama-15, kwaye ke uhlambe ngokucokisekileyo imaski.
Xa ingxaki yesikhumba kunye ne-acne effect iyakwazi ukunika i-mask ekhethekileyo ebusika ukusuka kumhlophe abamhlophe. Sithatha amaqanda amabini enkukhu, sihlule iprotheni kwi-yolk. Emva koko ususe iprotheni size sithole i-foam eninzi. Ngoku sifanele sisebenzise i-masochka kwindawo ecocekileyo ngaphambili kwaye emva kwemizuzu engama-20 siyisuse ngamanzi afudumele.
Ukuba ulusu lukhulile ngemibimbi, unokwenza umask ngesiseko sobo busuku. Thatha isipuni sesibhobho uze unyibilike, uze udibanise neqanda leqanda. Hlanganisa i-1 teaspoon yobusi. Sifaka imaski ebusweni, kwaye sisusa i-remains yayo ngokuncedisa i-discton disc. Le maski ayithinteli nje isikhumba, kodwa iphinda ihluthe imibimbi.
Omnye ubusika besikhumba esikhulileyo ngumaski we-cognac. Sidinga ukhilimu weoli e-100 milliliters, enye yenkukhu zheltok, enye ithunipoon yobusi, enye, kodwa isisipuni se-juice icons (2 dessert spoons). Sidibanisa zonke izithako size sisebenzise imaski ngaphambi kokulala.
Kodwa ngesibonakaliso ebusika ngokubheka ubuso, imaski yobusi-i-mask ye-tea iya kunceda. Kwi-1 teaspoon esitsha esitsha, songeza ii-2 teaspoons zobusi kunye nama-flakes. Dweba umsiki kumanzi ngamanzi kwaye usetyenzise ubuso ubuso besiqingatha seyure.
Uhlobo lwesikhumba oluqhelekileyo luyisiski esilula kunye nekhilimu omuncu. Ukuze sipheke, asinakuze senze umzamo kunye nokuchitha ixesha, kwanele nje ukubeka iindidi ezininzi zobisikhilimu ebomnini ebusweni kwaye emva kokuba umgca wokugqibela usomile, susa imaski ebusweni.
Ukukrazula i-skin-hit beaten and redness iya kunceda ukuphazamisa ukhathala nobisi. I-recipe ilula kakhulu: thatha iipunipoji ezi-3 ze-oat flakes uze uzigcwalise ngobisi olufudumeleyo, esiza kukhetha enye yepunipoon enye. Sishiya i-flakes ukuze sivule, emva kokuba sisebenzise imaski kwisigamu seyure kwaye siyihlambe ngamanzi ashushu.
Yile ndlela i-masks elula ekhangelelana ngayo ityhila ubuso bethu ebusika kwaye ikhusele kwimiphumo emibi yeqabunga nokubandayo.
Iindlela zamasiko ezikhupha ulusu ngobuso
Indlela yokunyangwa nge-acne ekhaleni?
Iziqhamo zeziqhamo ebusweni, i-skin peper with vitamins
Ukuzivocavoca umlomo kunye nezihlathi
I-Gelatin mask ebusweni: iindlela zokupheka kunye neengcebiso
Iimpawu zobuso ekhaya
Ungazihlaziya njani ukuba yonke into imbi?
UJulienne kwi-salmon epinki
Iibhonsi nge jam
I-Lemon kunye nobusi kunye nemifuno eyomileyo
Izibane zeRoma: ubuqili bokukhetha
Inyoka ibetha ephupheni, yintoni na?
Indoda kwindlu yokuhambisa: iingxoxo kunye nokuchasene
Indlela yokugqoka izithende ngaphandle kwentlungu
Ubomi bomntu we-actress Yevgenia Kryukova
Ukwandisa imida eqhelekileyo: imfashini yefashini ekwakheni indawo yokuhlambela
I-Manty: iresiphi, iyanandi
Indlela yokususa i-shellac kwiindlela ezibonakaliswe ekhaya
Indlela yokuchazela umntwana umfuno wokufunda
Ukusikwa kwe-Thai kwi-CROWN THAI SPA-umnqweno wolonwabo
Isobho senkukhu kunye namadaka